go'yaal plexiglass-saareyaasha & Shirkado cusub - Shiinaha go'yaal plexiglass Factory
Waraaqaha 'Plexiglass' waxay ku yimaadaan cabbirro iyo dhumuc ballaaran. Astaamaha xaashida acrylic-ka waxaa ka mid ah: adkeysi, hufnaan, tayo joogto ah, midnimo, u adkaysiga cimilada, khafiif iyo nabadgelyo, caabbinta UV, Cadaadiska Kiimikada iyo waxqabadka muuqda. Xaashida looxa waxay leedahay gudbinta nalka oo aad ufiican - wayna kafiican tahay dhalada! Midab huruud noqon maayo ka dib qorraxda oo sii dheeraata.
Xoqo plexiglass iska caabin ah
Xoqo xoqida plexiglass waxaa loola jeedaa plexiglass oo leh dusha sare oo dusha sare, iska caabin xoqan. Waxyaabaha jireed, aaladaha farsamada, iyo iska caabinta cimiladu waxay la mid yihiin sida plexiglass-ka caadiga ah. Adagnaanta dusha sare waa mid sare, iska caabin xoqan, iska caabin xoqan, iyo iska caabbinta daxalka kiimikada.
1. Hufnaan hufan iyo gudbinta iftiinka oo leh 93%.
2. Nadiifinta korantada oo aad u fiican, miisaankeedu aad u fudud yahay.
3. Balaastik sare, Habaynta iyo qaabaynta si fudud.
4. Adaggada oogada oo kacsan iyo cimilo wanaagsan oo guryaha iska caabisa
5. Midab qurux badan, fudud oo nadiif ah
1.Consumer goods: alaabta fayadhowrka, alaabta guriga, xafiisyada xafiisyada, farsamada gacanta, guddiga kubbadda koleyga, shelf shelf, iwm
Waxyaabaha Xayeysiinta: calaamadaha calaamadaha xayeysiinta, calaamadaha, sanduuqyada nalka, calaamadaha, astaamaha, iwm
3. Qalabka dhismaha: hooska qorraxda, guddiga dahaarka codka (saxanka shaashadda codka), qolka taleefanka, aquarium, aquarium, dahaadhka derbiga ee gudaha, hudheelka iyo qurxinta hoyga, nalalka, iwm
4. Meelaha kale: qalabka indhaha, kumbuyuutarrada elektarooniga ah, iftiinka iftiinka, nalalka dabada baabuurka iyo muraayadaha gawaarida ee kala duwan, farshaxan gacmeed, xardho, boodhadhka calaamadaha iyo alaabada ay ku ciyaaraan iwm.